Imindeni ayihlukane kokubanga imali 'yeqolo' - Sassa | News24
Imindeni ayihlukane kokubanga imali 'yeqolo' - Sassa
Mbombela – ISouth African Social Security Agency (Sassa) eMpumalanga isinxuse amalungu omphakathi ukuba ayeke ukubanga imali yesibonelelo sezingane (imali yeqolo) ngoba kugcina kuyizingane ezihlukumezekayo.
Lokhu kungemuva kokuba iSassa ithole izimangalo eziningi ngemindeni elwayo ibanga imali yeqolo.
Funda nalolu daba: Kushone abasebenzi kuqubuka umlilo emayini
“Sinxusa abantu ukuba bayeke ukubanga imali yeqolo. Bonke abantu abanakekela izingane kumele baveze ubufakazi bokuthi yibona abanakekela izingane,” kusho imenja yakwaSassa esifundazweni, uMoffat Mogane, kuleli sonto.
UMogane uthe imvamisa kubayizingane ezibanenkinga uma kuxabana umndeni, nangesikhathi kuzazanywa ukuthola ukuthi ngubani okumele aholele ingane.